Izimakethe ezihamba phambili eSpain | Izindaba Zokuhamba
Izimakethe ezihamba phambili eSpain
El Rastro de Madrid, ukuqokwa okungenakuphikwa nganoma yiliphi iSonto
Ngaphandle kokuqhakaza kwezentengiselwano online, izimakethe zendabuko zigcina leyo ntelezi ebenza babe yindawo ethokozisayo yokuhamba ngokukhululeka bathole ingcebo yangempela. Zulazula, qhathanisa futhi uthenge… Siyazithanda izimakethe! Kungakho kokuthunyelwe okulandelayo sikulethela okunye okupholile kunazo zonke eSpain ukuthi masonto onke kudonsela amakhulu ezivakashi.
1 Imakethe yeNavacerrada
2 Umkhondo waseMadrid
3 Imakethe Yezimoto
4 Ukufakwa kwe-Els
6 I-Alcaicería yaseGranada
7 Imakethe yeMestalla
8 Vula iGanbara yakho
Abathandi bezinto zakudala nezinto ezingamasekeni banesikhathi sokubonana emakethe yezintambo eNavacerrada njalo ngeSonto. Kutholakala ePaseo de los Españoles s / n, endaweni engaphandle kulula ukubuka imephu yesimo sezulu ngaphambi kokuyivakashela uma kwenzeka kubanda kakhulu noma kushisa. Lapha ungathola amathoyizi, i-tableware, imidwebo, amawashi, izithombe, amalambu, ama-vinyls, ifenisha ... uhlelo oluhle lokujabulela izintaba zaseMadrid.
I-El Rastro iyimakethe efanekisela iMadrid eneminyaka engaphezu kwengu-400 yomlando lapho ungathola khona zonke izinhlobo zezinto zansuku zonke, ama-antique kanye nezisolo. Kuyimakethe evulekile evulekile ebanjwa ngeSonto nangamaholide enkabeni yomlando yenhlokodolobha, endaweni emaphakathi neLa Latina, ikakhulukazi kuRibera de Curtidores Street.
Eminye yemigwaqo ezungeze iRibera de Curtidores inikezelwe ekuthengisweni kwemikhiqizo ekhethekile njengobuciko, izincwadi, omagazini, izitika, izinto zakudala kanye nezilwane imbala.
Yize kukhona izixuku kwesinye isikhathi ezakheka kwezinye izindawo, kumnandi kakhulu ukuchitha iSonto ekuseni uvakashela amatafula aseRastro ukuqedela izabelo nama-tapas emabhaweni aseduze.
Isithombe | I-Telemadrid
Ngempelasonto eyodwa ngenyanga, isiteshi sesitimela esidala saseDelicias, esokuqala esikhulu ukwakhiwa eMadrid futhi namuhla esineSitimela Museum, sinezitebele eziningi ezenzelwe imfashini, ukuhlobisa kanye ne-gastronomy. Futhi inendawo lapho abantu bethengisa izinto abangasazisebenzisi kepha zikhethwe kahle.
Ngaphezu kwalokho, iMercado de Motores yithuba elihle kakhulu lokwazi ingaphakathi lemnyuziyamu, engesinye sezakhiwo ezinkulu zezakhiwo zezimboni kusukela ngekhulu le-XNUMX elisemi eMadrid. Itholakala ePaseo de las Delicias, 61 futhi inendawo yokudlela lapho ungajabulela khona isidlo sangokudla ngenkathi ujabulela umculo omnandi.
Imakethe yedels Encants eBarcelona, ​​eyaziwa nangokuthi iMercat Fira de Bellcaire, iyona enkulu kunazo zonke futhi endala kunazo zonke edolobheni. Itholakala e-Avinguda Meridiana, 73 futhi yenzeka ngoMsombuluko, ngoLwesithathu, ngoLwesihlanu nangoMgqibelo.
Akugcini lapho ungathola khona zonke izinhlobo zezinto lapha, kepha futhi indali ihleliwe futhi kunikezwa nohlu lonke lwezinsizakalo ezihambisanayo, njengezinsizakalo ze-gastronomic. Isimo sokudla kwasemgwaqeni naso seza kule makethe yaseBarcelona ukuze izivakashi zizonambitha izitsha ezimnandi esikhaleni noma zibayise emakhaya ngemuva kosuku olunamandla lokuphequlula. Njengokungathi lokho bekunganele, kukhona nemisebenzi yezemfundo nokuzijabulisa yazo zonke izinhlobo zayo yonke iminyaka.
Isithombe | Cugat.cat
Ukuhambahamba ngeMercantic ngeSonto ekuseni ukungena edolobhaneni lezindlu ezinemibala ye-pastel ebonakala ngathi ithathwe ku-Instagram. Abathandi bomhlobiso weVintage bazothola eMercantic isikhala lapho bengathola khona izingcezu zefenisha yasendulo nezinto ezitholakale kakhulu. Kukhona nalabo abazakhela eyabo imiklamo kanye nemihlangano yokufundisana ehlelelwe ngisho nomuntu ophatha kahle kakhulu.
Isitolo sezincwadi i-El Siglo sigqame kakhulu, lapho amakhonsathi nama-vermouth kuhlelwe khona ngombukiso nokuthengiswa kwezinkulungwane zezincwadi ezindala nezingamasekeni. IMercantic ivulwa nsuku zonke futhi itholakala e-Av. De Rius i Taulet, 120, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Ngezikhathi zika-Al-Andalus kwakuyimakethe yenkosi yaseGranada lapho kusetshenzwa khona usilika nazo zonke izinhlobo zemikhiqizo kanokusho. Ngemuva kokunqotshwa kabusha kwaqhubeka kwaba yisikhungo esibalulekile sezohwebo kepha sasincipha kwaze kwaba ngekhulu le-XNUMX lahlaselwa umlilo omkhulu. Njengamanje inesikhala esincane kunaleso sokuqala kodwa isavakashelwa ngokulinganayo ngabantu bendawo nabavakashi. Kuvulwa nsuku zonke kuze kube ngu-21 ebusuku ku-Alcaicería Street.
Yimakethe edume kakhulu yaseValencian phakathi kwabathandi be-retro ne-vintage. Ifakwa njalo ngeSonto nangamaholide enkundleni yezimoto iMestalla stadium. Ku-2019 izoba nendawo entsha ngemuva kokudlula e-Alameditas de Serranos, isikwele saseNaples naseSicilia futhi, njengamanje, phakathi kwe-Aragón neSweden izindlela, eduze kwenkundla iMestalla. Kule makethe, kuhlanganiswa izinto zakudala, amathuluzi, amarekhodi, izithombe, izingubo nazo zonke izinto umuntu angazicabanga.
Isithombe | Isikhala esivulekile
Vula iGanbara yakho
Imakethe yesimanje neyakhayo isendaweni ehlukile enjengefekthri yakudala yama-Artiach cookie. Vula iGanbara Yakho, isinyathelo esisha esenzeka ezindaweni ezivuselelwe ukuletha uhla lwezokungcebeleka, imfashini, ubuciko nobuchwepheshe kuzo zonke izethameli. Lapha, osomabhizinisi baveza izinhlobo nemiklamo yabo kepha phakathi kwamatafula ungasindisa nento ethile eyingqayizivele neyevini. Vula iGanbara yakho ibisendaweni yaseLa Ribera de Deusto / Zorrotzaurre kusukela ngo-2009.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » Izimakethe ezihamba phambili eSpain
Futhi imakethe yangeSonto e-Sant Antoni, e-Barcelona! Vermouths nezincwadi!
Ukuguqulwa konogada eLondon